Chinese nri ọgwụ - Shijiazhuang Yiling Hospital
Chinese nri ọgwụ (na-akpọ oriri na-edozi ọgwụ na dietary ọgwụ) bụ a mode nke achọghị gbanyere mkpọrọgwụ Chinese kweere banyere mmetụta nke nri na ahụ mmadụ, na hiwere echiche dị otú ahụ dị ka na-eri na imeru ihe n'ókè. Ya isi n'iwu ndị a mix nke mpako na echiche na echiche adọta si omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ.
Food ọgwụ dịwo anya a nkịtị obibia ike n'etiti ndị mmadụ.
Diet dị ka ndị kasị mkpa ná ndụ, ruo n'ókè dị ukwuu, na-emetụta ahụ ike anyị. N'ihi na ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọrịa, nri ọzọ dị mkpa. N'ihi na anyị na-arịa ọrịa, ụbọchị ọ bụla ha diets ịhụ na rụọ ahụ mgbake, mgbe ukpụhọde ahu, nke mere na ahụ ike-eweghachi a dịtụ ike ikwu ozugbo o kwere omume, ka imeta mma ọgwụgwọ mmetụta.
Chinese nri ọgwụ nwere oké mmetụta n'imeso cancer, scleroderma, muscular atrophy, rheumatism, moto ụdị ọrịa akwara, fibromyalgia, ọrịa shuga, nephropathy, na ọzọ di iche iche nke ala ala ọrịa na oké ikpe.
Ịkpọ ọkachamara maka kpọmkwem ajụjụ.